> Resource > Utility > Sida loo dayactir Mfc80u.dll Khaladaadka la Jidka lagu kalsoon yahay oo wax ku ool ah
Waa maxay baadi Mfc80u.dll?
Mfc80u.dll waa file Microsoft ay isticmaalaan barnaamijyada kala duwan ee badanaa loo abuuraa qaladaad inta ku rakibidda ama la isticmaalayo barnaamijka ama inta lagu jiro nidaamka xawaaladaha ama xiritaanka. Baadi Mfc80u.dll waxaa inta badan ka dhacay ay sabab u tahay Diiwaanka khaladaad, boos hoos u disk, virus computer, file Bedelanayaan burburay oo burburay ama version sax ah file mfc80u.dll.
Common baadi fariimaha Mdc80u.dll
• Ma heli karaa [PATH] mfc80u.dll
• Faylka Mfc80u.dll maqan yahay
• Mfc80u.dll lagama helin
• Codsigan ku guuldareystay inuu ku soo bilowdo, maxaa yeelay, ma Mfc80u.dll laga helay. Dib-u-rakibidda codsiga hagaajin laga yaabaa in dhibaatadan.
• ma bilaabi karaan [ARJIGA]. Qayb A baahan yahay waxaa ka maqan: mfc80u.dll. Fadlan rakibi [ARJIGA] mar kale.
Sida loo hagaajin khaladaad Mfc80u.dll?
1. Orod scan fayras
Cudurka Virus keeni kartaa qalad Mfc80u.dll. Haddii aad computer cudurka by furin ama virus, waxaad u baahan tahay in la sameeyo baaritaan virus ah markii ugu horeysay. Ka dib markii dhowr iyo nadiifinta fayraska, computerka aad. Haddii qalad Mfc80u.dll weli sii socoto, hubi waxyaabaha hoos ku qoran.
Diiwaanka Windows 2. Repair
Diiwaanku wuxuu qayb ka yahay waxa ugu muhiimsan ee nidaamka, kaas oo loogu talagalay in lagu fududeeyo howlaha oo dhan software aad ku rakiban iyo hardware kombiyuutarka. Marka uu ku kharribeen ama dhaawac, Windows aanay shaqyn karaa, iyo inta badan khaladaadka nidaamka waxaa sababa ay dhaawac. Saasuuna u hagaajinta ay lagama maarmaan tahay. Halkii lacag la qarashgareeyo inaysan wax badan oo ku saabsan adeegga, waxa aad si fiican u hagaajin lahaa shaqaalayn ah dayactirka diiwaanka qalab. Aan u maleeyeen in aad dayactirto ama database diiwaanka edit gacanta ay sabab u tahay muhiimadda ay leedahay waxaa ka mid ah haddii aadan noocan oo kale ah geek.
3. barnaamijyada uninstall la xiriira
Haddii fariin qalad ah uu kuu sheegayaa in codsiga ma ordi karaan sabab u Mfc80u.dll maqan, waxaad isku dayi kartaa in uninstall barnaamijka ka dibna dib. Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah files aan waafaqsanayn nidaamka lagu rakibay intii lagu rakibo ee barnaamijka.
4. Download Mfc80u.dll cusub
Download Mfc80u.dll file internetka (hubi in website-ka aad ka soo dejisan Mfc80u.dll sharci ahaan la aqoonsan yahay). Markaas ka heli file Mfc80u.dll hadda on your computer:
Tag "Ka bilow> baadh", gali "mfc80u.dll", sida caadiga ah file DLL taas waxa uu ku yaalaa on disk deegaanka C, markaas waa inaad ka raadin kartaa in ay "Disk Local (C :) "(Ama waxaad dooran kartaa in aad soo baadhaan in" cajaladaha Local ").
Markaas magaca faylka Mfc80u.dll asalka ah, oo nuqul ka cusub download mid si gal ah. Ha tirtirto Mfc80u.dll asalka si degdeg ah oo la sameeyo gurmad ah waxaa ka mid ah.